Podcast တခုကိုစုစည်းခြင်း၊ စည်းညှိခြင်း၊ မြှင့်တင်ခြင်းစစ်ဆေးရန်အချက်များ | Martech Zone
သင်၏ Podcast ကိုမည်သည့်နေရာတွင်လက်ခံမည်၊ စုစည်းရမည်၊ မျှဝေမည်၊
သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 22, 2021 တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 7, 2021 သောမတ်စ် Brodbeck
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဒီနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည် အသံလွှင့်ရုံသည်လူကြိုက်များသည်။ တကယ်တော့အသက် ၁၂ နှစ်အောက်အမေရိကန် ၂၁% ဟာပြီးခဲ့တဲ့လက Podcast တခုကိုနားထောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ် တဖြည်းဖြည်းတစ်နှစ်ကျော်တစ်နှစ်တိုးပွားလာခဲ့သည် ၂၀၀၈ မှာ ၁၂% ကနေစပြီးဒီအရေအတွက်ကဆက်ပြီးကြီးထွားနေတယ်ဆိုတာကိုပဲငါတွေ့ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်ပိုင် Podcast တခုကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလား။ ကောင်းပြီ၊ ဦး ဆုံးစဉ်းစားရမည့်အရာအနည်းငယ်ရှိသည် - သင်၏ podcast ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မြှင့်တင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်၏ podcast မြှင့်တင်ခြင်းမှရရှိသောသင်ခန်းစာနှင့်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် Web ၏ Edgeဒါကြောင့်သူတို့ကမင်းတို့အတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။
ငါမကြာသေးမီကသူတို့ရဲ့ podcasts တွေကိုစုစည်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်တိကျတဲ့မဟာဗျူဟာများဖြန့်ကျက်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Podcast တခုကိုများအတွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သည် Dell Luminaries Podcast တခုကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း podcasts တွေကိုထိပ်ဆုံး ၁ ရာခိုင်နှုန်းထဲထည့်သွင်းပါ။
မည်သည့်လမ်းညွှန်ကိုမဆိုဖြန့်ဝေခြင်းမပြုမီသင်မည်သည့်နေရာတွင်အလိုရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည် အိမ်ရှင် မင်းရဲ့ podcast ။ သင်၏ podcast hosting ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်သင်၏ podcast ကိုမည်သည့်နေရာတွင်တင်နိုင်သည်ဆိုသည်ပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ အချို့လမ်းညွှန်များသည်အခြားသူများနှင့်အချို့သောဆက်စပ်မှုများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Podcast ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော Edge အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Libsyn နှင့် host လုပ်၍ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လူကြိုက်အများဆုံး host တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ podcast ကိုပုံမှန်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သင်၏လက်ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မတင်ပါနှင့်။ Podcast hosting ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြီးမားသော audio file sto stream နှင့် web မှ download လုပ်ရန်အတွက်အခြေခံအဆောက်အ ဦ တစ်ခုရှိသည်။ ပုံမှန် web hosting ပတ်ဝန်းကျင်များသည်နားထောင်ခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး bandwidth အသုံးပြုမှုအတွက်အလွန်အကျွံကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အတူသင်ငွေပင်ကုန်ကျနိုင်သည်။
ဒေါက်ဂလပ်အိမ်ရှင် Martech Zone အင်တာဗျူး, စက်ဝိုင်းထဲကနှင့် ဝါရင့်သွန်း နှင့် Firesideသင့်ရဲ့ podcast နှင့်အတူဝက်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည့်လှပသော user interface နှင့်ထူးခြားသော podcast အိမ်ရှင်။ site တွင်အကန့်အသတ်မရှိ host များ၊ အကန့်အသတ်မရှိ guest ည့် profiles များ၊ စပွန်ဆာကြော်ငြာများ၊ show link များ၊ subscription link များ၊ share pages နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော HTML5 podcast စသည်တို့ပါဝင်သည်။
သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အခြား podcast hosting ကုမ္ပဏီများမှာ -
Acast - Podcast ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ နားထောင်ခြင်း၊ hosting နှင့် RSS ဖြန့်ဝေခြင်း။
ကျောက်ဆူး - အကန့်အသတ်မရှိသောဖြစ်စဉ်များကိုဖန်တီးပြီးအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါ၊ နေရာတိုင်းကိုပြသပြီးငွေရှာပါ။ အားလုံးအခမဲ့တစ်နေရာတည်း။
အော်ဒီယို - သီးသန့်နားထောင်သူများထံရောက်ရှိပြီး podcasting ရှိထိပ်တန်းအရည်အချင်းမှတက်ကြွသောကြော်ငြာထည့်သွင်းမှုများနှင့်ထောက်ခံချက်များဖြင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်သတင်းစကားကိုပို့ဆောင်ပါ။
Blubrry - Blubrry.com သည် podcasting အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်လမ်းညွှန်ဖြစ်ပြီးဖန်တီးသူများကိုငွေရှာရန်၊ အသေးစိတ်တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏အသံနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံနိုင်သည့်စွမ်းအားကိုပေးသည်။ သင်ကမီဒီယာဖန်တီးသူ၊ ကြော်ငြာရှင်ဒါမှမဟုတ်မီဒီယာသုံးစွဲသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Blubrry ဟာခင်ဗျားရဲ့ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာမျက်နှာပြင်ပါ။
ကံ - အခမဲ့ podcast hosting ဖြင့်ယနေ့ podcasting ကိုစတင်ပါ ကံသင်၏ podcast ကိုလက်ခံရန်၊ မြှင့်တင်ရန်နှင့်ခြေရာခံရန်အလွယ်ကူဆုံး podcasting software ။
လောင်းချလိုက်သည် - hosting နှင့် scheduling မှ activation နှင့် analytics အထိ၊ Casted သည်အသံဖြင့် B2B စျေးကွက်အတွက်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။
Libsyn - Libsyn သည်သင်၏ Podcast လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ထုတ်ဝေခြင်းကိရိယာများ၊ မီဒီယာလက်ခံခြင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်း၊ iTunes အတွက် RSS၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ကြော်ငြာများ၊ Premium အကြောင်းအရာ၊ အက်ပလီကေးရှင်းအတွက်အက်ပ်များ၊
အသံချဲ့စက်များ - သင်၏ podcast လုပ်ငန်းကိုထုတ်လွှင့်ရန်၊ ငွေရှာရန်နှင့်တိုင်းတာရန်အတွက်ကိရိယာများ။
Omny စတူဒီယို - Omny Studio သည်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ podcasting ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းအယ်ဒီတာ၊ ငွေရှာခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ သတင်းပို့ခြင်းနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။
Bရာဝတီ - အလွန်ရိုးရှင်းသော podcast ထုတ်ဝေသည့်အဖြေ။ bandwidth နှင့်သိုလှောင်မှုအကန့်အသတ်မရှိ။ Podcast တခုကိုသင် podcast ကိုလက်ခံရန်၊ မြှင့်တင်ရန်နှင့်ခြေရာခံရန်လိုအပ်သည်။
နေ - သင်၏ podcasts များကိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့်ဖော်ပြပါ။
SoundCloud - SoundCloud တွင် podcasting ပြုလုပ်ခြင်းသည်မည်သူမဆိုပုံပြင်များပြောပြရန်၊ တင်ရန်နှင့်မျှဝေရန်လွယ်ကူစေသည်။ သင်၏လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်တည်ငြိမ်ပြီးအလိုအလျောက်ခံစားနိုင်သည့် audio hosting platform ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပါ။
Spreaker - Spreaker ကအားလုံးကိုရှိပါတယ်! သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီး podcasts တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ (သို့) သင့်ကွန်ပျူတာ (သို့) လက်ကိုင်ဖုန်းကနေတိုက်ရိုက်ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံရယူဖို့အဆင်သင့်လုပ်ပါ။
Podcast ဂျက်လေယာဉ် - Premium Podcasting Hosting: အရှိန်နှင့်အမြန်ဆုံးပေးပို့ခြင်း။
သင့်ရဲ့ podcast hosting ကိုပြင်ဆင်ပြီးနောက်တရားဝင် RSS feed ရှိရန်လိုအပ်သည်။ podcast hosting အကောင့်ကိုသင်ချိန်ညှိတဲ့အခါ RSS feed ကိုချိုးဖဲ့မဲ့အရာတစ်ခုခုကိုသင်လွတ်သွားလိမ့်မယ်။ မည်သည့်လမ်းညွှန်ကိုမဆိုမပို့မီ၊ သင်၏ RSS feed သည်မှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ RSS ထည့်သွင်းမှုကိုစမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုပါ Feed Validator ကိုချပစ်ပါ သင်သည်မည်သည့်အမှားများလုပ်မိလျှင်ကြည့်ရှုရန်။ သင့်တွင်မှန်ကန်သောအစာကျွေးမှုရှိပါကသင်၏လမ်းညွှန်စာအုပ်သို့သွားပါ။
ဘေးထွက်မှတ်ချက်: သင်၏ podcast ကိုရရှိနိုင်သည့်မည်သည့်လမ်းညွှန်ကိုမဆိုမတင်ပြမီသင့် RSS feed တွင် podcast ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုထက်ပိုရန်သင့်အားအကြံပေးလိုသည်။ သင်လမ်းညွှန်ချက်အများစုကို podcast တစ်ခုတည်းဖြင့်သာသင်တင်သွင်းနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်တို့၏ podcast မှနားထောင်သူအများစုအတွက်သူတို့သည်သင်ပြသမှုကိုမ ၀ င်မီဖြစ်စဉ်ထက်ပိုပြီးကြည့်ချင်ကြသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ iPhone ကို နှင့် အန်းဒရွိုက် မိုဘိုင်းစျေးကွက်တွင်ပစ္စည်းကိရိယာများလွှမ်းမိုးနေပြီး၊ ပထမမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှစ်ခုသည် podcast တိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
iTunes - သင်၏ RSS feed ကိုဖန်တီးပြီးပါကသင်၏ podcast ကို iTunes သို့တင်ပြခြင်းသည်သင်၏ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သင့်သည်။ iTunes မှာ podcasters တွေအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးကွန်ယက်တစ်ခုရှိတယ်။ သင့်မှာ Apple ID ရှိဖို့လိုတယ်၊ သင့်မှာ iPhone ရှိပြီးသားဆိုလျှင်သင့်မှာ ID ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ဒီကိုဆိုင်းအင်လုပ်ပါ iTunes Podcast သင်၏အိုင်ဒီနှင့်ချိတ်ဆက်မှုချိတ်ဆက်မှုစာမျက်နှာနှင့်သင်၏ RSS feed ကို URL နေရာထဲသို့ကူးထည့်ပြီးပြသပါ။ သင်၏အကောင့်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ခွင့်ပြုချက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရနိုင်ပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ သင် iTunes သို့လက်ခံသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏ tools သည် iTunes မှ feeds များကိုရယူသောအခါသင်၏ show သည်အခြားကွဲပြားသော podcatchers များစွာတွင်အလိုအလျောက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် iTunes နှင့်သင်မည်သည့်အရာကိုမျှမရနိုင်ပါ analytics သင်၏အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်သော
သင်၏ Podcast ကို iTunes တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
Google Podcasts Manager - သင့်ရဲ့ podcasts နားထောင်ခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဂူးဂဲလ်ဟာထူးခြားတဲ့သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပြသမှုအရေအတွက်၊ ပထမရက် ၃၀ တွင်ပြသခြင်း၊ ပျမ်းမျှကြာချိန်ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်၊ ထို့နောက်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဂူဂဲလ်အကောင့်တစ်ခုဖြင့်ဆိုင်းအင်ဝင်ပြီး၊ အဆင့်များကိုလိုက်နာပါ သင့်ရဲ့ Podcast ကိုထည့်ပါ.
သင်၏ Podcast ကို Google တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
ပန်ဒိုရာ - Pandora သည်ကြီးမားသောပရိသတ်ဖြစ်ဆဲဖြစ်ပြီး podcasts များကိုအပြည့်အဝထောက်ခံသည်၊ ၎င်းကိုစောင့်ကြည့်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
သင်၏ Podcast ကို Pandora တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
Spotify - Spotify သည်အသံပါဝင်မှုကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေပြီး Anchor ကို ၀ ယ်ယူခြင်းအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရန်အလေးအနက်ရည်ရွယ်သည်။ အသုံးပြုသူများစွာနှင့်သင်လက်လွတ်မခံလိုပါ။
သင်၏ Podcast ကို Spotify ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပါ
အမေဇုံ Amazon Music သည်အတော်လေးအသစ်ရောက်ရှိလာသော်ငြားလည်း Audible, Prime နှင့် Alexa ၏လက်ထောက်လက်လှမ်းမီမှုဖြင့်သင်သည်ဤအရေးကြီးသောလမ်းကြောင်းကိုမထားသင့်ပါ။
သင်၏ Podcast ကို Amazon Music ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပါ
သင်၏ podcast ကိုသင်၏ကိရိယာများ၊ လမ်းညွှန်များနှင့်လည်းမှတ်ပုံတင်နိုင်သည်၊
Acast - သင်၏ podcast သည်အခြားပံ့ပိုးသူတစ် ဦး တွင်လက်ခံထားသည့်တိုင်သင်၏ podcast ကိုအခမဲ့ starter အကောင့်တစ်ခုဖြင့်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။
သင်၏ Podcast ကို Acast တွင်ထည့်ပါ
AnyPod - AnyPod သည် Amazon Alexa စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများအတွက်လူကြိုက်များသောကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ Podcast ကို AnyPod တွင်ထည့်ပါ
Blubrry - Blubrry podcast ၃၅၀,၀၀၀ ကျော်စာရင်းပြုစုထားသောအင်တာနက်ပေါ်တွင်အကြီးဆုံး podcast လမ်းညွှန်လည်းဖြစ်သည်။ podcasters များအတွက်ကြော်ငြာနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်.
အခမဲ့ Blubrry အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးသင်၏ Podcast ကိုထည့်ပါ
အနိုင်အထက် - အနိုင်အထက် သင့်ရဲ့ podcasts တွေကိုရောင်းချပြီးမြှင့်တင်ဖို့အတွက်စျေးကွက်တခုဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့အက်ပလီကေးရှင်းကကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့သင့်ရဲ့ Podcast ကိုလူမှုရေးဝေမျှခြင်းကိုအထူးအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်။
သင်၏ Podcast ကို Breaker သို့ဆက်သွယ်ပါ
Castbox - Castbox သင်၏စာရင်းသွင်းသူများနှင့်တိုင်းတာ၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအပြင်စီး ၀ င်ခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် Castbox Creator Studio ကိုခိုင်မာသည့် podcasting သရုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများကိုပေးသည်။
သင်၏ Podcast ကို Castbox သို့ပေးပို့ခြင်းလမ်းညွှန်
iHeartRadio - ဘို့ iHeartRadioဒီနေရာဟာ Libsyn ကိုသင့်ရဲ့အိမ်ရှင်အနေနှင့်ပေးချေရသောနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် iHeartRadio နှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင်ချန်နယ်ကိုအလိုအလျှောက်ဖန်တီးရန်နှင့်ကျွေးရန်သင်၏ Libsyn အကောင့်ကိုသင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုတည်ဆောက်ရန်သင်၏အကောင့်ရှိ“ Destinations” tab အောက်ရှိ“ Add New” ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် iHeartRadio စီးဆင်းရန်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ မှတ်စု: သင်၏ Podcast သည် iHeartRadio သို့မတင်သွင်းမီ Libsyn အတွင်း ၂ လကျော်ကြာအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ Podcast ကို iHeartRadio သို့ပို့ပါ
မှောငျသော - သင်၏ Podcast သည် iTunes တွင်ရှိနှင့်ပြီးလျှင်တစ်ရက်အတွင်း Overcast ပေါ်လာလိမ့်မည်။ မရရှိပါက၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ထည့်နိုင်သည်။
သင်၏ Podcast ကို Overcast သို့ကိုယ်တိုင်ထည့်ပါ
အိတ်ကပ် Cast - အသုံးပြုသူများကိုစက်ပစ္စည်းများမှတဆင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်၊ နားထောင်နိုင်စေမည့် ၀ က်ဘ်အခြေပြုနှင့်မိုဘိုင်း application ။ သင့်ရဲ့ Podcast တခုကိုမှတဆင့်တင်ပါ အိတ်ဆောင် Cast တင်သွင်း စာမျက်နှာ။
သင်၏ Podcast ကို Pocket Casts သို့တင်ပါ
Podchaser ပါ - Podcast တခုကိုဒေတာဘေ့စ်နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိရိယာ။ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကသင်နှစ်သက်တဲ့ podcasts တွေကိုတုံ့ပြန်ချက်ပေးဖို့နဲ့ podcasts တွေကိုအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ သင်၏ podcast ကို Podchaser တွင်ရှာပါ။ သင် podcast feed တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအီးမေးလ်ကို သုံး၍ သင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
သင်၏ Podcast ကို Podchaser တွင်တောင်းဆိုပါ
Podknife - Podknife သည် podcasts များကိုခေါင်းစဉ်နှင့်တည်နေရာအလိုက်စီစဉ်ခြင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးတဲ့အွန်လိုင်း podcasts လမ်းညွှန်တခုဖြစ်တယ်။ အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံး podcasts များကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးနှစ်သက်နိုင်သည်။ သင်မှတ်ပုံတင်ပြီး login လုပ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တင်သွင်းမှုလင့်ခ်ကိုမီနူး၌တွေ့လိမ့်မည်။
ရေဒီယို - RadioPublic သည် podcasters များစောင့်ကြည့်နေကြသောကျန်းမာသန်စွမ်းနိုင်သော၊ ငွေရေးကြေးရေးအရရေရှည်တည်တံ့သော Podcast နားထောင်ခြင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ နားထောင်သူတွေကိုသင်ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ podcast ထုတ်လုပ်သူတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်။ ဒီနေ့ပရိသတ်နဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုစတင်ရန် RadioPublic တွင်သင်၏ပြသမှုကိုစစ်ဆေးပါ။
သင်၏ Podcast ကို RadioPublic တွင်တောင်းဆိုပါ
ချုပ်ရိုး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, Stitcher ငါ့အကြိုက်ဆုံး Podcast တခုကို app ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ Podcast နားထောင်ခြင်းအားလုံးကိုဒီအက်ပ်မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သည်။ Stitcher သည်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးရေဒီယိုအစီအစဉ် ၆၅၀၀၀ ကျော်နှင့် podcasts များရရှိနိုင်သည်။ သင်၏ podcast ကိုတင်ရန်သင်သည်မိတ်ဖက်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ပြသမှုစာရင်းများကိုပါတနာပေါ်တယ်တွင်လည်းရရှိနိုင်သည်။
သင်၏ Podcast ကို Stitcher ထဲသို့ထည့်ပါ
TuneIn - TuneIn ဟာသင် podcasts တင်သွင်းနိုင်သောအခြားအခမဲ့လမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ podcast ကိုတင်ရန်သင်သည်သူတို့၏ပုံစံကိုဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြားလမ်းညွှန်များကဲ့သို့သင်ကဲ့သို့ TuneIn တွင်အကောင့်တစ်ခုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်သင်၏ feed ကိုတစ်စုံတစ်ရာကိုမွမ်းမံရန်လိုအပ်ပါကသင်သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထပ်မံလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ TuneIn မှာ Amazon စွမ်းရည်ရှိပြီးသင့်ရဲ့ podcast ကို Alexa-powered devices များမှတဆင့်ကစားနိုင်ပါတယ်။
သင်၏ Podcast ကို TuneIn ထဲသို့ထည့်ပါ
Vurbl - အသံဖန်တီးသူအမျိုးအစားအားလုံးနှင့်အသံနားထောင်လိုသောမည်သူမဆိုအတွက်အသံလွှင့်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံလွှင့်သူများအားကျွန်ုပ်တို့၏အသံလွှင့်ဌာနပုံစံမှတစ်ဆင့်ထောက်ပံ့သည်။ နားထောင်သူများသည်နားထောင်ရန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ Vurbl ဘူတာပြောဆိုပါ
လူမှုမီဒီယာတွင် Audiograms များကိုမျှဝေပါ
Audiogram - သင်၏အသံကိုလူမှုရေးဗွီဒီယိုများနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ Audiogram.
ခေါင်းစီးသတင်း - လှိုင်းပုံစံမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ဗွီဒီယိုတွင်ဖြစ်ရပ်များအပြည့်အစုံဖန်တီးခြင်း၊ အလိုအလျောက်ကူးယူခြင်းနှင့်သင်၏ podcast ကိုသင်လိုချင်သလောက်ဗီဒီယိုများဖြင့်မြှင့်တင်ခြင်း ခေါင်းစီးသတင်း.
ကဗျာ - ကဗျာ သင့်ရဲ့ podcast အသံပါသောဗွီဒီယိုများကို - သူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုသုံးပြီးလူမှုရေးအရဝေမျှနိုင်တဲ့ - အော်ဒီဂရမ်ကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။
ဂူဂဲလ်သည် Podcasts များကိုရည်ညွှန်းပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်စာမျက်နှာများရှိဝိုင်းစုတွင်လည်းပြသသည်ကိုသင်သိပါသလား။ ဂူဂဲလ်သည်ခြေလှမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးသည် သင့်ရဲ့ Podcast တခုကိုရည်ညွှန်းသည်သေချာပါစေ သူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုဆောင်းပါး၌တည်၏။ သင်၌ရှိလျှင် podcast တစ်ခုရှိကြောင်းဂူဂဲလ်ကိုမည်သို့သေချာစေရန်ငါရေးသားခဲ့သည် WordPress သည်ပြင်ပ Podcast တခုတွင် Podcast ကိုလက်ခံထားသည် hosting ဝန်ဆောင်မှု။
Podcast Smart Banner ကိုထည့်ပါ
iOS ထုတ်ကုန်များက Apple ရဲ့ iPhone အသုံးပြုသူများကိုသင်၏ podcast ကိုကြည့်ရှုရန်၊ Podcasts အက်ပ်တွင်ဖွင့ ်၍ ကြည့်ရှုရန်အတွက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာစမတ်နဖူးစည်းစာရွက်ကိုထည့်သွင်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာဒီဆောင်းပါးမှာဖတ်နိုင်ပါတယ် Podcast အတွက် iTunes Smart Banners.
သင်၏ podcast ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံရန်သို့မဟုတ်အခြားလမ်းညွှန်တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပေးဆောင်ထားသောလမ်းညွှန်များလည်းရှိသည်။ ဤအရာအချို့အတွက်သင်ပေးဆပ်ရန်တွန့်ဆုတ်နေမည်ဖြစ်သော်လည်းသင်၏ပရိသတ်သည်မည်သည့်နေရာတွင်နားထောင်နေသည်ကိုသင်ဘယ်တော့မျှမသိနိုင်ပါ။ ငါသူတို့ကိုအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကြိုးစားကြည့်ပြီးမကြေညာခင်ဒီလမ်းညွှန်တွေကနေဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေရလဲဆိုတာကိုအကြံပေးလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်အခမဲ့အကောင့်တစ်ခုဖြင့်စတင်သည်၊ သို့သော်သင်သည်သင်၏အခမဲ့အကောင့်ထဲတွင်နေရာလွတ်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
Acast - Acast သင့်ရဲ့ podcast ကိုဖန်တီးပြီးမျှဝေဖို့သင်လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်။
AudioBoom - AudioBoom အသံလွှင့်သူတွေကိုအသံကိုလက်ခံ၊ ဖြန့်ဖြူးနိုင်တယ်။
PodBean - Bရာဝတီ Spreaker နှင့် podcast host အနေနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံအရကျွန်ုပ်တို့၏ RSS feed တင်သွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြissuesနာများရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ရပ်များကိုအမြဲတမ်းရရှိမည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ podcasters တွေကြားမှာလူကြိုက်များတဲ့ host တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
PodSearch PodSearch သည်သင်နှစ်သက်သော podcasts များကိုရှာဖွေရန်အတွက်အမျိုးအစားများ၊ ထိပ်တန်းပြပွဲများ၊ ပြသမှုအသစ်များနှင့်သော့ချက်စာလုံးများစသည့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောရှာဖွေရေးကိရိယာများကိုပေးသည်။ ဒီနေရာမှာမှတ်ပုံတင်ပါ.
SoundCloud - SoundCloud Web Radio ၏ Edge သည်ကျွန်ုပ်တို့ Libsyn အကောင့်တွင်ပါသောနောက်ဆုံးပေါ်လမ်းညွှန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ခုကိုအလိုအလျောက်စည်းညှိနိုင်ပြီးအကောင့်၏ဖန်တီးမှုမှာ Libsyn မှတဆင့်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။
Spreaker - Spreaker အထူးသဖြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်လိုသော podcasters များအကြားတွင်ရေပန်းစားသောအိမ်ရှင်ဖြစ်သည်။ သူတို့မှာကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားရှိတယ်၊ တိုက်ရိုက်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုလုပ်နိုင်သလိုတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုကိုလွဲချော်တဲ့သူတွေအတွက်အဖြစ်အပျက်တိုင်းကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်တယ်။
အခြားသူတွေရှိတယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါတွေဟာငါတို့သုံးတဲ့လမ်းညွှန်တွေပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Podcast ထုတ်လုပ်မှုဖောက်သည်များအတွက် Edge Media Studios။ သင့်မှာငါလွဲချော်နေနိုင်တဲ့အခြားသူတစ်ယောက်ရှိရင်၊ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုပြောပြပါ။
WordPress Podcast ဘေးထွက်ဝစ်ဂျက် - သင်၏ podcast သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာထဲသို့ထည့်ခြင်းသည်သက်ဆိုင်ရာနားထောင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ WordPress Podcast Sidebar သည်သင်၏ site ရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆိုသင်၏ podcast feed တစ်ခုလုံးကို (ကစားသမားနှင့်) embed လုပ်ရန် widget (သို့) shortcode နှစ်ခုလုံးကိုခွင့်ပြုသည်။
Jetpack - သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက် WordPress ၏ Premiere plugin သည် podcast player ကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးပေးသောသင်၏အကြောင်းအရာထဲသို့ထည့်သွင်းနိုင်သည့် podcast ပိတ်ဆို့မှုတစ်ခုယခုပင်ရှိသည်။
WordPress တွင်သင်၏ podcasts များကိုလှပစွာပြသမည့်အပိုဆောင်းပေးဆောင်ထားသော plugins အချို့ကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။
MP3 Sticky Player WordPress ပလပ်အင်
တော်ဝင်အသံဖွင့်စက် WordPress ပလပ်ဂင်
HTML5 အသံဖွင့်စက်များ WordPress Plugins စုစည်းမှု
လွယ်ကူသော Audio Player WordPress ပလပ်အင်
အသစ်နှင့်အဟောင်းနှစ်ခုလုံးကိုသင်၏ podcasts များကိုမြှင့်တင်ရာတွင်လူမှုမီဒီယာ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္forgetကိုမမေ့ပါနှင့်! Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram၊ ဂူဂဲလ် + ပင်လျှင်အားလုံးသည်သင်၏ပရိသတ်ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်သင်၏အကြောင်းအရာအတွက်နားထောင်သူနှင့်စာရင်းသွင်းသူများကိုမောင်းနှင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုနှင့်အတူ Agorapulse, သင်ရှယ်ယာများကိုထိုပရိုဖိုင်းများအားလုံးကိုလွယ်ကူစွာတန်းစီရုံသာမကအမြဲတမ်းအစိမ်းရောင်ဟုမှတ်ယူနိုင်သော podcasts များအတွက်ထပ်တလဲလဲရှယ်ယာများသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်, သင်ကဲ့သို့ tool ကိုသုံးလျှင် Feedpress ပါသင်၏ podcast ကိုသင်၏လူမှုမီဒီယာပရိုဖိုင်းများသို့အလိုအလျောက်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။
ဒီပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာသင်ပရိသတ်ကိုတိုးများလာသည်နှင့်အမျှပရိသတ်အသစ်များသည်သင်၏အရင် podcasts များကိုမတွေ့ရကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏သော့ချက်သည်သင်၏ podcast ခေါင်းစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ရုံသာမဟုတ်ဘဲဆွဲဆောင်မှုရှိသောလူမှုမီဒီယာပို့စ်များကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းများမေးပါသို့မဟုတ်အဓိက takeaways စာရင်းကြိုးစားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်သြဇာရှိသူကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖော်ပြပါကသင်၏လူမှုရေးရှယ်ယာများတွင်မှတ်သားထားပါ။
ထုတ်ဖော် - ထုတ်ကုန်အနည်းငယ်အတွက်ဒီပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်၏တွဲဖက်လင့်ခ်များကိုအသုံးပြုသည်။
Tags: တကယျAmazon ဂီတဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အော်ဒီယိုကဗျာကွမ်းခြံကုန်းကက်စထရိုအစွန်းမီဒီယာအစွန်းရောက်မီဒီယာစတူဒီယိုepod လမ်းညွှန်google playအချစ်ရယ်itunesJetpackသီရိစျေးကွက်ရှာဖွေရေး PodcastMartech အင်တာဗျူးများရေတံခွန်podcast လမ်းညွှန်များpodcast လမ်းညွှန်podcast feedpodcast hosting အတွက်podcast မက်ထရစ်podcast အရောင်းမြှင့်တင်ရေးpodcast စုစည်းpodcastingလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တကတင်ဆက်မှုSoundCloudSpotifyspreakerstitcherသင်၏ podcast ကိုတင်ပါစုစည်းTuneInမြဝတီလွိုင်ကော်ဘယ်မှာကျင်းပမလဲဘယ်မှာမြှင့်တင်ရန်ဘယ်မှာစုစည်းWordPress
Tom Brodbeck သည် Indianapolis ရှိ full-service marketing agency ဖြစ်သော Hirons ရှိအကြီးတန်းဒစ်ဂျစ်တယ်မဟာဗျူဟာနှင့်ဒီဂျစ်တယ်အဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ သူ၏အတွေ့အကြုံသည် SEO၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အသံ / ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည်။ သူသည်ယနေ့ Social Media နှင့် Search Engine ဂျာနယ်တို့တွင်လည်းပါဝင်သည်။
Creative Team သည် C-Suite သို့သူတို့၏တန်ဖိုးကိုသရုပ်ပြရန် Executive Scorecard တစ်ခုမည်သို့တည်ဆောက်ခဲ့သည်